PRIYANKA CHOPRA JONAS 'FESTIVE-OGQIBELELEYO BUN IINWELE EZIVELA HER INSTAGRAM - PAMPEREDPEOPLENY.COM - UBUHLE
I-4 Bun Hairstyles ukusuka ku-Priyanka Chopra Jonas 'Instagram eya kuthi ikhuphe ubuhle bakho bokuKhangela
Ekhaya Ubuhle Ukunyamekela iinwele Ukhathalelo lweenwele oi-Aayushi Adhaulia Ngu UAayushi adhaulia Ngo-Matshi 17, 2021
Imibhiyozo zizihlandlo ezifanelekileyo zokubonisa izakhono zakho zokuzilungisa kunye neenwele. Ngumsitho apho udibana nabahlobo bakho kunye nezihlobo kwaye ucofa imifanekiso emininzi kwaye ke kufanele ukuba ubonakale umhle. Ukusukela, ixesha lokonwaba kunye nexesha lomtshato lisemoyeni, siyazi ukuba kufanelekile ukuba ujonge izimvo ezifanelekileyo zezinwele ukuze uyenze mhle imbonakalo yakho. Namhlanje, size neengcinga zeenwele kubo bonke abathandi be-bun. Iibhanti azikulungeli kuphela ngeempahla zobuhlanga kodwa zigcina neenwele zakho zingabikho ebusweni bakho. Ngapha koko, elona candelo lilungileyo malunga neebhonsi kukuba iza ngeendlela ezahlukeneyo ukusuka kwinto elula ukuya kwisitayile kwaye ke unokukhetha eyona ilungileyo ngokwexesha, indawo, kunye nexesha.
Umqondiso wehlabathi UPriyanka Chopra uJonas Ngaba yiprosesa kwi-acing bun iinwele. Ukuza kuthi ga ngoku, simbonile ebethelelwa ngokulula kunye neenwele ezimnandi ze-bun kwaye ngoku sele eyindlela yakhe yokuhamba. Ngamanye amaxesha ubatsala ngesitayile esingaqhelekanga, ngamanye amaxesha uyinika into ekhethekileyo. Nazi ke iinwele ezi-4 ezahlukileyo ze-bun esizifumene kwiprofayile ye-diva ye-Instagram, eya kuthi ngokuqinisekileyo ikuncede uyenze mhle imbonakalo yakho yomnyhadala.
Priyanka Chopra's I-Looped Bun
U-Priyanka Chopra watsala zonke ii-tresses zakhe zaya kwi-bun eqhelekileyo. Kwaye le yakhe yeenwele yinto enokwenziwa phantsi kwemizuzu emi-5. Konke okufuneka ukwenze kukuba, kuqala ubambe zonke iinwele zakho esandleni sakho kwaye uzibophelele kwi-ponytail ngoncedo lwe-elastic. Thatha enye inwele elastiki kwaye wenze iluphu. Shiya ezinye iinwele ezongezelelweyo ukwenza umphumo ombi. Uhlobo lwee-bangs zakho okanye uzikhusele ngoncedo lwezikhonkwane ze-bobby kwaye ugqibile.
I-Priyanka Chopra's Front Twist Bun
U-Priyanka Chopra uJonas wenze ingxelo enamandla kumabhaso eFashoni kunye ne-bun yakhe yangaphambi. Le nwele yakhe ikhangeleka yahlukile kwaye ke ifuna ixesha kunye nezakhono ukuyenza. Ukuyila, qala uthabathe icandelo langaphambili leenwele zakho kwaye ulikhusele nge-elastic ukuze ulisebenzise kamva ukujija. Bamba iinwele eziseleyo kwaye uzibophelele kwi-ponytail ephezulu ecocekileyo. Beka isincedisi sokwenza umrhwebi kufutshane nomsila wehashe kwaye udibanise zonke iinwele zakho ngaphezulu kwaye ujikeleze ukuze uzenze zibukeke. Khuselekile ngezikhonkwane ze-bobby. Ngoku likhulule icandelo langaphambili, ulitsale umva, kwaye ulijike ngokujikeleza isetyhula. Khusela ngezikhonkwane ze-bobby kunye ne-hair spray.
Icala lika-Priyanka Chopra elahlukileyo leKnot Bun
Kumsitho weDiwali, u-Priyanka Chopra wadibanisa intyatyambo yakhe entle eshicilelweyo ene-knot bun kwaye wakhangeleka emangalisa. Uye wanika iinwele zakhe icala lokwahlulahlula ngee-bangs, wayila ibunzi lakhe lesiqingatha, elilungele ukubonakala kwakhe. Ukwenza le nwele, bamba zonke iinwele zakho kwaye uzibophe zibuyele kumbindi wehashe. Ngoku thatha iinwele zomhashe wakho kwaye uzisonge ngokujikeleza kwewotshi yakho. Nje ukuba ufikelele kwiingcebiso zeenwele zakho, tuck iinwele phantsi kwetayi yeenwele. Uhlobo lwee-bangs zakho kwaye ulungile ukuba uhambe.
Priyanka Chopra kaThixo Bun alukiweyo
U-Priyanka Chopra uJonas wanyikimisa ibhonkco eboshiweyo ngokugqibeleleyo kwaye ujongeka umhle kunye nesitayile. Le nwele yakhe ilungele imithendeleko kunye nemitshato. Ukwenza i-hairstyle efanayo, khetha icandelo eliphezulu leenwele zakho kwaye uqalise ukudala isifrentshi okanye i-dutch braid ngaphambili. Qhubeka ukongeza icandelo elincinci leenwele zakho kwi-braid yakho njengoko ubuya umva. Nje ukuba ufike kwinxalenye yesithsaba sentloko yakho, bamba zonke iinwele kwaye uzibophelele kwiponytail ephezulu. Gweba i-ponytail uze wenze i-bun.
Ke, yeyiphi intloko ye-bun Priyanka chopra Ngaba ubukuthanda kakhulu? Masiyazi loo nto kwicandelo lokuphawula.
I-Pic Credits: I-Instagram kaPriyanka Chopra
iikowuti ze-subhash chandra bose ngesiNgesi
indlela yokunyamekela iinyawo
ukusela ubisi ekuseni isisu esingenanto
Izibonelelo zokuhlafuna ukutya amaxesha angama-32
indlela yokwenza ibele libe likhulu ngokuthambisa
indlela yokusebenzisa ilitye lepumice ekususeni iinwele